Usuku lokuqala onyakeni omusha | Biblia Zuluensis
Usuku lokuqala onyakeni omusha
usuku lokuqala ngqa
Ngenxa yamasiko nenqubo eyahlukene kunamazwe azibalela ngendlela yawo-nje ukuqhubeka kweminyaka nokulandelana kwayo – awanasizathu sokulandela umthetho woMbusi weBandla lamakholwa eRoma: Zilishumi nane kuMandulo [14 Sebthemba] nyakenye  bekuwusuku lokuqala lonyaka omusha ngokohlelo lweminyaka [ikhalenda] ngokwenkolo yesiJuda, obekungunyaka wezinkulungwane ezinhlanu namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nesithupha . Zilishumi nane kuMfumfu [14 Okthoba] unyaka omusha ngokwenkolo yesiSulumane, obekungunyaka wenkulungwane namakhulu amane namashumi amathathu nesikhombisa , uqalé ngokushona kwelanga. Zilishumi nesishiyagalolunye kuNhlolanja [19 Febhwari] nyakenye  abaseShayina bebebingelela unyaka omusha, obekuwunyaka wamashumi amathathu nambili  ohlwini lwamashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye  ohlelweni lweminyaka ngokwenqubo yaseShayina, obekuwunyaka weMbuzi yeDuna.
Izincazelo ngonyaka wesine ohlelweni, omude ngosuku kuneminye, itholakala kwaboLwazi ngezoMkhathi nezeziNkayezi: Bathi umhlaba ugijima ibanga elingamakhilomitha angamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amane  ngonyaka lizungeza ilanga. Nòma ugijima ngesivinini samakhilomitha ayizinkulungwane eziyikhulu nesikhombisa [107 000] ngehora, uthatha izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu kanye nezingxenye ezingamashumi amabili nane zosuku [365,24] ukuzungeza ilanga. Unyaka ngokwejwayelekile uyizinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu . Ingxenye engamashumi amabili nane osuku [0,24] igcina isihlanganisé usuku olugcwele eminyakeni emine. Kungakho-ke eminyakeni emine kuyaye kube nonyaka omqhuqhumbe, onezinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nesithupha .
NguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini, weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha kweBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; Umtapo wolwazi: Klaus Merhof, Das Ende des Neujahrs-Chaos‘, in: Evangelische Zeitung, 03.01.2016, 11.
Ingosi: ezisematheni 2159 Asebevakashile Imibono nemibuzo: 0